कांग्रेसको दोस्रो जागरण अभियान सकिँदै, कसले कहाँ सम्वोधन गर्दै ? - अभियान खबर
कांग्रेसको दोस्रो जागरण अभियान सकिँदै, कसले कहाँ सम्वोधन गर्दै ?
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले गत भदौ २४ गतेदेखि थालेको दोस्रो चरणको जागरण अभियान मंगलबार (असोज ७) गते सकिँदैछ ।
७७ वटै जिल्लामा मंगलबार काँग्रेस नेताहरुले सरकारको विरोधमा विभिन्न कार्यक्रम गर्दैछन् । हरेक क्षेत्रमा काँग्रेसले केन्द्रीय प्रतिनिधिहरु खटाएको छ ।
यसअघिका दिनमा काँग्रेसले कार्यकर्तालाई जागरुक गराउनेदेखि सुभेच्छुक मतदाताहरुलाई भेट्ने काम गरेको छ भने अन्तिम दिन सरकारको भण्डाफोर गर्ने योजना रहेको काँग्रेस पार्टी मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘सरकारको अप्रजातान्त्रिक गतिविधि, अलोकतान्त्रिक व्यवहार, भ्रष्टाचार, कुशासन लगायतको भण्डाफोर गर्दै विरोध गर्न लागिएको जनाए ।
देउवाको कार्यक्रम स्थगित
सबै क्षेत्रमा केन्द्रीय प्रतिनिधिहरु खटिएका भए पनि शीर्ष नेताहरुले अन्तिम दिन विशेष ठाउँमा संवोधन गर्दैछन् ।
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कैलालीमा संवोधन गर्ने कार्यक्रम भएकोमा अन्तिम समयमा आएर कार्यक्रम स्थगित भएको छ ।
चिनियाँ विदेश विभागका प्रमुखसंग भेट गर्ने कार्यक्रम तय भएपछि उनको कैलाली जाने कार्यक्रम स्थगित भएको मुख्यसचिव पौडेलले जानकारी दिए ।
अन्य नेताहरुको कार्यक्रम यस्तो छ –
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल – रोल्पा
उपसभापति विमलेन्द्र निधि – कैलाली
उपसभापति विजयकुमार गच्छदार – भक्तपुर
महामन्त्री डा शशांक कोइराला – खोटाङ
सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महत – अछाम
कृष्ण सिटौला – सुनसरी
महेश आचार्य – कास्की
एनपी साउद – धनुषा
गगन थापा – केही दिनदेखि प्रदेश २ का विभिन्न जिल्लामा ।
Posted on April 2, 2020 Author abhiyaan
Posted on April 6, 2020 Author abhiyaan
२४ चैत, काठमाडौं । सरकारले लकडाउन ८ दिन थप गरेको छ । सोमबार अपराह्न सकिएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बैशाख ३ सम्म लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो । लकडाउनको अवधि दोस्रो पटक थपिएको हो । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को दोस्रो संक्रमित भेटिएपछि सरकारले चैत ११ बाट १८ गते बिहान छ बजेसम्मका लागि लकडाउन घोषणा गरेको थियो । त्यो […]
मिडियालाई नियन्त्रण गर्न खोजिदै, नियमनका नाममा सम्पूर्ण रूपमा नियन्त्रित ‘मिडिया काउन्सिल’ गठनको तयारी
सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन खोजेको छ । सोही अनुसार केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पत्रकारलाई त्रासमै राखेर पत्रकारिताको फराकिलोपनलाई खुम्च्याउन खोजेको छ । अहिलेको प्रेस काउन्सिललाई विस्थापन गर्ने गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले संसद् सचिवालयमा ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल’ सम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएको छ। यसअनुसार आचारसंहिता उल्लंघनको विषयमा कारबाही दायरा कठोर बनाउँदै विधेयकमा […]